ချဲ့ Tools များ | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-keymachine.org
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ်-> ထုတ်ကုန်များ -> Lock ကို Pick Tools များ -> ချဲ့ Tools များ
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ချဲ့ Tools များ ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
မြင့်မားတဲ့နည်းပညာအဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာအပေါ်အခြေခံသည်သောဤကောက်ယူမှုသော့ပြင်လုပ်ငန်းသည်လယ်ပြင်၌မြင့်သောအကျိုးရှိစွာရွေး tools တွေကိုဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသော့ပြင်လုပ်ငန်း-Benz & BMW ကားများကဲ့သို့ပင်အဆင့်မြင့်မော်တော်ယာဉ်များ၏ပြဿနာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်
Searchlight မြင့်မားအကျိုးရှိစွာချဲ့ & စူပါခိုင်မာစေ Pick ဘားနှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောကြောင့်သင်ဆလင်ဒါကောက် & ကားသို့မဟုတ် / နှင့်မော်တော်ဆိုင်ကယ်သော့ခတ်ဘို့အသစ်တစ်ခု keys တွေကိုလုပ်ကိုကူညီန့်ကိုဆလင်ဒါ၏အမျိုးမျိုးသောပုံစံအားဖြင့်တွေ့နိုင်ပါသည်။ လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး & သင့်ရဲ့ကြိမ်သိမ်းဆည်းပါ။
ရှုထောင်: 110 မီလီမီတာ (W) * 28mm (ဃ) * 190mm (H)